BountyMiner - automated Bounty ပလက်ဖောင်း | Airdropics
BountyMiner - automated Bounty ပလက်ဖောင်း10 минут чтения
အဆိုပါဆုပလက်ဖောင်းအပေါ်နောက်ထပ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခေါ် မင်္ဂလာပါ - ပုဂ္ဂလိကရုံးနှင့်အတူ Bounty automated ပလက်ဖောင်း, အရာအားလုံးဖြစ်စဉ်များအလိုအလျောက်, လက်ခံရရှိရန် passive တိုကင်နှင့် cryptocurrencies လိုအပ်သည်.
မင်္ဂလာပါ - ၀ န်ဆောင်မှုပေးသောပေးဆောင်မည့်ပလက်ဖောင်းအသစ် ICO စီမံကိန်းများနှင့်ကျေးဇူးမုဆိုး.
ရုံစီမံကိန်းအတွက်မှတ်ပုံတင်ရန်, သင်၏လူမှုကွန်ယက်များကိုချိတ်ဆက်ပါ, သင့်ရဲ့ cryptocurrency ပိုက်ဆံအိတ်ထည့်ပါနှင့်သင်သည်ဤပလက်ဖောင်း၏အသစ်တစ်ခုအဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး ဖြစ်ကြသည်.
1. BountyMiner ပလက်ဖောင်းမှတ်ပုံတင်ခြင်း
3. ကဏ္ sections အားလုံးကိုအစီအစဉ်အတိုင်းရှာဖွေပါ
3. အသုံးပြုသူအမည် →သင်၏အသုံးပြုသူအမည်ကိုရိုက်ထည့်ပါ.
4. အီးမေးလ် →သင်၏အီးမေးလ်ကိုရိုက်ထည့်ပါ.
5. စကားဝှက် စကားဝှက်တစ်ခုဖန်တီးပါ.
6. စကားဝှက်ကိုပြန်ရိုက်ပါ →စကားဝှက်ကိုရိုက်ထည့်ပါ.
7. စာနယ်ဇင်း→ မှတ်ပုံတင်ပါ.
မေးလ်ဖြင့်မှတ်ပုံတင်အတည်ပြုချက်, BountyMiner ပလက်ဖောင်းရန်
သင်၏အကောင့်သို့ BountyMiner ပလက်ဖောင်းပေါ်သို့ဝင်ရောက်ပါ
ကဏ္ sections အားလုံးကိုအစီအစဉ်အတိုင်းရှာဖွေပါ
- အားလုံး - အားလုံး;
- Active Campaigns - တက်ကြွ;
- အပြီးသတ်ကင်ပိန်း - ပြီးစီးခဲ့သည်;
- ခေါင်းလောင်း - ဒါတွေကမင်းရဲ့အသိပေးချက်တွေပါ.
- လူသားအိုင်ကွန် — это ваше меню.
ကျွန်ုပ်၏စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများ — ваши баунти кампании в которых вы принимаете участие и здесь же можно посмотреть сколько ставок вы получили по каждой баунти.
ငှက်ပျောသီး — здесь вы можете участвовать в Airdrop кампаниях.
ချိန်ညှိချက်များ — настройки.
Log out - ထွက်ပေါက်.
Советы по настройке аккаунта, BountyMiner ပလက်ဖောင်းရန်
စာနယ်ဇင်း→ Facebook က.
2. စာနယ်ဇင်း→ Log in with Facebook.
3. စာနယ်ဇင်း→ ဆက်လုပ်ပါ.
BountyMiner ပလက်ဖောင်းသို့ Facebook ချိတ်ဆက်ပါ
4. နောက်တစ်ခုကိုမက်ဆေ့ခ်ျကိုဖြစ်လိမ့်မည်, သင်အောင်မြင်စွာချိတ်ဆက်ပြီ, ကိုကလစ်နှိပ်ပါ→ အဆင်ပြေလား.
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကို BountyMiner ပလက်ဖောင်းကိုအောင်မြင်စွာချိတ်ဆက်နိုင်ပြီ
Twitter ကို BountyMiner ပလက်ဖောင်းနဲ့ဆက်သွယ်ပါ
2. စာနယ်ဇင်း→ twitter နှင့်ဝင်မည်.
Twitter ဖြင့် BountyMiner ပလက်ဖောင်းတွင်ဆိုင်းအင်လုပ်ပါ
3. စာနယ်ဇင်း→ Авторизовать.
2. စာနယ်ဇင်း→ Log in with Reddit.
Войти в Reddit, BountyMiner ပလက်ဖောင်းရန်
3. စာနယ်ဇင်း→ ခွင့်ပြုပါ.
2. စာနယ်ဇင်း→ Bitcointalk ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ဆက်တင်များ и спуститесь вниз.
3. မျဉ်းကြောင်း→ ဝဘ်ဆိုက်ခေါင်းစဉ်, введите название сайта, как показано на картинке ниже.
5. Добавьте её в строчку → ဝဘ်ဆိုက် URL.
6. Перейдите на сайт → ။.
7. စာနယ်ဇင်း→ PROFILE.
8. →ကိုအသာပုတ်ပါ အကျဉ်းချုပ်.
10. Вставьте код в → သင့်ရဲ့ Bitcointalk ID.
11. စာနယ်ဇင်း→ ထည့်ပါ.
ပရိုဖိုင်းကိုထည့်သွင်းရန် Bitcointalk ဖိုရမ်မှ BountyMiner ပလက်ဖောင်းသို့ဆက်သွယ်ပါ
Telegram ကို BountyMiner ပလက်ဖောင်းသို့ဆက်သွယ်ပါ
2. စာနယ်ဇင်း→ နှင့်ဝင်မည် ကွေးနနျးစာ.
BountyMiner ပလက်ဖောင်းပေါ်မှ Telegram ဖြင့်လော့ဂ်အင်လုပ်ပါ
5. စာနယ်ဇင်း→ နောက်တစ်ခု.
2. မျဉ်းကြောင်း→ သင့်ဘာသာစကားရွေးပါ, သင့်ဘာသာစကားရွေးပါ.
3. စာနယ်ဇင်း→ သိမ်းဆည်းပါ.
သင်၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက်အသေးစိတ် - သင်၏ပရိုဖိုင်အကြောင်းအသေးစိတ်အချက်အလက်.
username - သင်၏အသုံးပြုသူအမည်.
အီးမေးလ် - သင်၏အီးမေးလ်.
စကားဝှက်ကိုပြောင်းရန် - သင်သည်စကားဝှက်ကိုပြောင်းနိုင်သည်.
2FA ဖွင့်ပါ - Two-factor authentication.
Подробная информация о профиле, BountyMiner ပလက်ဖောင်းရန်
Подключим 2အက်ဖ်အေ — двухфакторную аутентификацию, для дополнительной защиты
စာနယ်ဇင်း→ 2FA ဖွင့်ပါ.
4. စာနယ်ဇင်း→ Scan QR code.
5. မိုဘိုင်း app ကို Download လုပ်ပါ Google Authenticator သို့မဟုတ်Authy.
6. Просканируйте СВОЙ QR ကုဒ်ကို или введите в ручную номер ниже.
8. စာနယ်ဇင်း→ verify для подключения.
ETH wallet address — введите в это поле, публичный адрес вашего Ethereum ငှေအိတျ.
NEO wallet address — введите в это поле, публичный адрес вашего NEO ငှေအိတျ.
5. နာမည် — введите имя вашего кошелка.
7. စာနယ်ဇင်း→ သိမ်းဆည်းပါ.
ကောင်းပြီ, သေးငယ်တဲ့ bounty ပလက်ဖောင်းအပေါ်ပြန်လည်သုံးသပ်အဆုံးသတ်ခဲ့သည် မင်္ဂလာပါ အလိုအလျောက်လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်အတူတိုကင်များနှင့် cryptocurrencies ဝင်ငွေရန်, ထိုသို့သာသင်၏မျက်နှာသာအတွက်ပါပဲ, ဝင်ငွေတစ်ခုအပိုဆောင်းအရင်းအမြစ်အဖြစ်. ကံကောင်းပါစေ🙂
စင်မြင့်ပေါ်တွင်မှတ်ပုံတင်ပါ မင်္ဂလာပါ: https://airdropics.com/BountyMiner
Ethereum ပိုက်ဆံအိတ်ကိုဖန်တီးပါ → MetaMask.
နောက်ထပ်ကျေးဇူးပလက်ဖောင်း, အရာသည်သင့်ကိုပျော်ရွှင်ပြီးကြွယ်ဝစေနိုင်သည်, ပြီးသားသင်၏အာရုံကိုစောင့်ဆိုင်း → မင်္ဂလာပါ
Tags: Airdrop, ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, Blockchain, Cryptocurrency, မင်္ဂလာပါ
Previous PostBounty0x - automated Bounty ပလက်ဖောင်း
Next PostBountyHub - automated Bounty ပလက်ဖောင်း